Isinxibo esiqhelekileyo saseBrazil, zithini iilokhwe zamaBrazil? | Iindaba Zokuhamba
Isinxibo esiqhelekileyo esivela eBrazil
UMariela Carril | | America, Brasil, isiko, Iindawo zokutyelela
Ngaba uyazi ukuba yintoni Isinxibo esiqhelekileyo esivela eBrazil? Ngaphambi kokuyazi, kufanelekile ukwazi ukuba izizwe ziyindalo yanamhlanje kwaye kulwakhiwo lwabo imiba eyahlukeneyo yobomi nenkcubeko yabantu abahlala kwimimandla yabo ibalulekile: ulwimi okanye iilwimi, uyilo, amasiko kunye Impahla eqhelekileyo okanye impahla, umzekelo.
Singathetha ngelizwe kunye neempahla ezininzi eziqhelekileyo ngokomda wommandla, udidi lwentlalo okanye iqela lesizwe kwimeko yokuba lilizwe elinabantu abaninzi. Umhlaba uyindawo eyahlukileyo kwaye amazwe amaninzi ngamazwe amancinci kubo. EMzantsi Melika, umzekelo, kukho iBrazil, ingxilimbela yokwenene. Zeziphi ezona mpahla ziqhelekileyo zaseBrazil?
2 Isinxibo esiqhelekileyo saseBrazil
IBrazil kunjalo ilizwe elikhulu ehlala kwinxalenye elungileyo yommandla woMzantsi Merika kwaye umphezulu wawo ugqunywe kwinxalenye enkulu lelinye lawona mahlathi atyebileyo kwaye atyebileyo kwihlabathi, iAmazon.
Brasil es umhlaba wabemi bomthonyama kwaye bekungekho kude kube ngenkulungwane ye-XNUMX ukufika kwabantu baseYurophu, AmaPhuthukezi. Ngombulelo kwiSivumelwano saseTordesillas, imihlaba idluliselwe kubukumkani basePortugal kunye nezigidi ezibini zomthonyama eziqikelelwa ngelo xesha kuhlala iBrazil, zaqala ukuba kholoni. Kwakukho amaqela eentlanga awayeza kuthi ekugqibeleni axubeke namaPhuthukezi, ukuze kuvele imixube emitsha yobuhlanga ngokufika kwamakhoboka amnyama avela e-Afrika.
Umntu ngamnye womthonyama wayenamasiko, imbali, ulwimi, nakwizinto eziqhelekileyo ezenzeka eMelika, amasiko aseBrazil anamhlanje aya kuzalwa, kwaye ke, ezahlukileyo iimpahla zaseBrazil umntu anokuzibona kwilizwe liphela.
Isinxibo esiqhelekileyo saseBrazil
Isinxibo esiqhelekileyo sineengcambu zabo eYurophu kuba amaIndiya ebengahambisi ngeziketi okanye ibhlukhwe. Ixesha lekoloniyali lahlala apha ngaphezulu kweminyaka engama-300 kunjalo ushicilelo lwamaPhuthukezi nolweYurophu kwiingubo ngokubanzi lwalomelele kakhulu. Abemi bomthonyama abathi ngasizathu sithile badityaniswa kwintlalo yobukoloniyali, kwaye abamnyama, banokulungelelanisa ukusetyenziswa kunye namasiko eenkosi zabo zaseYurophu xa benxiba.
Isinxibo esiqhelekileyo saseBrazil siyatshintsha ngokwendawo yelizwe kwaye singenza ulwahlulo olukhawulezileyo nolungenakuphikiswa olusebenza ukunika isampulu yalolu hlobo, ngaphandle kokuphela: iSalvador de Bahía, iRio de Janeiro, iAmazonas, iPernambuco neParaíba kunye Rio IGrande do Sul. Kwimeko yokugqibela sinesinxibo saseBrazil esiphindaphindwayo kwamanye amazwe angabamelwane afana neUruguay neArgentina: iimpahla Indoda yelizwe, iipanty kunye neehempe ezimhlophe.
Iibhulukhwe azikho ngaphezulu kobubanzi, ibhulukhwe evulekileyo, ebisetyenziswa kwaye isenziwa ngamadoda elizwe, njengoko bekhululekile ukukhwela. Kwiipanty kuyongezwa iihempe, ii iiponcho, Iibhutsi zesikhumba ezinemiphetho kunye neminqwazi yeendiza. Iibhulukhwe zibanjiwe ngesikhumba okanye iribhoni yoboya, mhlawumbi ngomhombiso.
Kwimeko Yempahla yaseBrazil efana nePernambuco neParaíba, Amazwe amabini aseBrazil, zizinxibo ezimibalabala ezihlala zibonwa kwiminyhadala nakwimithendeleko yabaxhasi: iilokhwe ezinde kubo, ezinesinqe esiphawuliweyo kunye imikhono ebanzi, ibhatyi ye-turtleneck kunye neebhutsi, isenokuba sisinxibo esine-flower print kunye nemibala, eyongeza Umtya kunye neeruffles neminqwazi.
Kwimeko emadodeni, banxibe ibhulukhwe emxinwa, ihempe ngetayi (ihempe inokuba inebala), isikhafu, ibhatyi enobude emadolweni enamaqhosha amathathu, umnqwazi womququ neebhutsi. Akushushu na ngeempahla ezininzi ezinzima? Ewe, kodwa masikhumbule ukuba imvelaphi yale mibhiyozo ayikho eMelika kodwa eYurophu kunye namaxesha ahlala ehamba ngendlela engafanelekanga.
Enye yeempahla eziqhelekileyo zaseBrazil ezinokuthi zichongwe ngokukhawuleza yile Abafazi baseSan Salvador de Bahia, iBahianas. Babiza inkolo yokuvumelanisa ebizwa camdomblé banxibe ke ngeziketi ezibanzi ezinde, iiblawuzi ezifekethweyo ngesandla kunye nezinto zokuhombisa ezinjengeentsimbi zomqala namacici amakhulu. Ngokwenyani le nkolo ibizwa kwiindawo ezahlukeneyo zaseBrazil kwaye iimpahla zinokwahluka kancinci ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye kodwa ngokusisiseko le yeyona nto ixhaphakileyo.
Luhlobo lwempahla yokusetyenziswa kwemihla ngemihla ethatha ukubalasela ngakumbi kwiminyhadala yenkolo kwaye emva koko itshintshe ikotoni elula nesebenzayo chintz, ngentambo okanye muslin. Con imhlophe kakhulu, ewe, akukho mbala mncinci. Ibhanti yongezwa kubude besifuba esisebenza njengebhodi okanye ibra kunye unkontsho, umbono wonxwemeAyikho enye into eyodlula ilaphu elibanjwe liqinile. Inkosi okanye umfazi ophetheyo ngaphakathi etempileni, wahlukile kwabanye kuba unxibe idyasi okanye ingubo ngaphezulu kwengubo kunye nonkontsho olukhulu ngakumbi.
Kwaye uthini nge Impahla eqhelekileyo yaseRio? Ikho? Ewe, ngaphezulu okanye ngaphantsi. Ngaba iimpahla zabadanisi beSamba yimpahla eqhelekileyo yaseBrazil? Ngengqiqo yokuba ichongiwe njengempahla yaseBrazil, kunokuba njalo. Kwenye, i-anthropological, ndinamathandabuzo am. Kodwa ke, ukuba umdanisi we-samba unebhikini encinci, enemibala.
Njengakwi-Carnival edadayo isinxibo sivavanywa, ezi bikinis zibuyela ebomini ngamatye, iintsiba kunye nokubengezela. Akukho mntu ubona esitratweni, kunjalo. Kodwa iiCarnival eRio yiminyhadala eyaziwayo njengemibhiyozo yecandomblé eBahia.
Okokugqibela, ukuba siya ku Amazon Singathetha ngempahla eqhelekileyo yabantu bomthonyama kodwa kuya kufuneka senze umahluko phakathi kwezizwe kwaye kunokuba nzima. Abemi boqobo bommandla weAmazon babeze ze bade bafika abemi baseYurophu kwaye xa beqala ukunxiba bakwenza oko belandela umzekelo wentuthuzelo hayi ifashoni yabantu baseYurophu.
Kukho umhlaba wonke izihombiso, izacholo, neebhendi, izinto zeenwele, ezahlula isizwe esinye kwesinye, nakwiminyhadala yenkolo bayagcinwa iimpahla ezithile ezenziwe ngamasebe, ixolo lomthi, okanye imicu yendalo abafumana umbala ngee-inki zemifuno. Ukukhokelwa kukusebenza, uninzi lweesinxibo eziqhelekileyo zigubungela amalungu esini kunye neendawo ezisemngciphekweni womzimba womntu.
Kunjalo ayizizo kuphela iimpahla eziqhelekileyo ezivela eBrazil. Ukuba awuboni kukhuphiswano lobuhle ukubona ukuba ngubani oyena mfazi mhle eBrazil, uyakuqonda ukuba ilizwe likhulu kwaye xa kufikwa kumba wokubonisa iimpahla eziqhelekileyo zininzi kakhulu. Kodwa njengesampulu, iqhosha lifanelekile kwaye olu luhlu lolwethu.
Wanxiba ntoni uBrazil?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Brasil » Isinxibo esiqhelekileyo esivela eBrazil
Iindawo ezi-7 zendalo eYurophu azifanele ziphoswe
IAberdeen, iperile eScotland